Miady miverina ny mpanjifa! | Martech Zone
Miady miverina ny mpanjifa!
Alarobia 23, 2006 Alarobia 23, 2006 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa hisy hiady hevitra fa ny tranonkala izao no loharano tsara indrindra hikarohana olona. Androany aho nahita lahatsoratra tamin'ny Dealzmodo avy amin'ny bilaogin'i Gizmodo ho an'ny a $ 79 17 ″ lamba fisaka hanara-maso. Toa tsara loatra ve ka tsy marina?
Ny iray amin'ireo hevitra ao amin'ny bilaogy dia milaza fa jereo ny eCost (ny mpivarotra indray) sy ny azy ireo naoty at ResellerRatings.com. eCost dia manana isa naoty ambany indrindra amin'ny rafitra - miaraka amin'ny fanavotana rebate mahatsiravina araka ny 87 mpandinika tao anatin'ny 6 volana farany sy 587 total.
Menatra aho milaza fa mbola tsy nahita ny ResellerRatings.com talohan'izay. Soa ihany, miantsena amin'ny NewEgg.com somary kely ary manana naoty tsara izy ireo! (Tiako ny safidin'izy ireo solosaina barebone!).
Taloha Tandremo ny mpividy....
fa izao kosa Mitandrema ny mpivarotra
Nanamarika ny ResellerRatings.com aho ary hijery akaiky ireo orinasa mety hividianako azy nefa mbola tsy nanao izany. Loharano mahafinaritra sy fitaovana lehibe hahafahan'ny mpanjifa miady! Tiako ny interweb, ny fantsona ary ny rehetra!
Ny andraikitry ny bilaogy amin'ny fampandrosoana IE7
Sep 7, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Ny vola lany dia nanelingelina ahy ratsy ary tokony ho fantatry ny mpanjifa ny momba ny vokatra sy ny serivisy tsy manara-penitra